बुटवल पावरको एफपिओ रुचाएनन् लगानीकर्ताले, बजार मूल्य झरिरह्यो
From setopati.com -	February 5, 2018 12:46 PM
बुटवल पावर कम्पनीको एफपिओमा न्यून आवेदन परेको छ। विगतमा अन्य कम्पनीहरुको एफपिओमा तोकिएको अगाडिको समयावधिमै मागभन्दा अत्यधिक आवेदन पर्ने गरेकोमा यसमा आवेदन न्यून परेको छ। आवेदन नै कम परेपछि बिक्री प्रवन्धक एनएमबि क्यापिटलले समयावधि समेत थप गरेको छ। गत शुक्रबार नै आइपिओको बिक्री बन्द गरिने नजिकको समय तोकिएकोमा अहिलेसम्म खुल्ला रहेको छ। क्यापिटलका अनुसार सम्पूर्ण कित्ताका लागि आवेदन परेपछि मात्रै बन्द हुनेछ। क्यापिटलका अनुसार तोकिएको अन्तिम अवधिसम्म पनि आवेदन खुल्ला रहन सक्नेछ। क्यापिटलका लेखा प्रमुख कमल नेपालले अहिलेसम्म ५० प्रतिशत बढी रकमका लागि आवेदन परेको जानकारी दिए। कम्पनीले कुल ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपिओ जारी गरेको थियो। प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँका दरले जारी हुँदा यसको कुल मूल्य २ अर्ब ४ करोडभन्दा बढी हुन्छ। यसमध्ये करिब ७५ हजार आवेदकबाट १ अर्ब २० करोड रुपैयाँजतिको आवेदन परेको क्यापिटलले जनाएको छ। आवेदन कम परेपछि संगठित संस्थाहरुलाई समेत सहभागी गराउने तयारी भएको छ। व्यक्तिगत तवरले पुरै कित्ता बिक्री नभएपछि संस्थागत लगानीकर्तालाई सहभागी गराउन पाइने व्यवस्थाअनुरुप गर्न लागिएको नेपालले जानकारी दिए। यसका लागि धितोपत्र बोर्डलाई समेत जानकारी गराइएको उनले बताए। न्यूनतम १० कित्ता आवेदन दिन पाइने र १० कित्ता दिनैपर्ने व्यवस्थालाई लगानीकर्ताले गलत रुपमा बुझेकाले पनि कम आवेदन परेको क्यापिटलको भनाई छ। ‘अहिले लगानीकर्तामा १० कित्ता मात्रै पर्छ, त्यतिकै लागि आवेदन दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ’ उनले भने ‘जसले गर्दा आवेदन गर्नेहरु संख्यात्मक रुपमा धेरै देखिए पनि रकमका आधारमा कम देखियो।’ कम्पनीको धेरै कित्ता एफपिओ रहेकाले पनि आवेदन कम देखिएको उनको भनाइ छ। लगानीयोग्य रकमको अभावले बढेको उच्च व्याजदरले पनि असर परेको विज्ञहरु बताउँछन्। एफपिओको मूल्यभन्दा दोस्रो बजारको मूल्य अन्तर धेरै नहुँदा यसमा आकर्षण नदेखिएको लगानीकर्ता बताउँछन्। ‘त्यतिबेलै बजारमा साढे ६ सय रुपैयाँ आसपासमा पाइने सेयरलाई एफपिओमा ५०१ मूल्य राख्नु नै धोकापूर्ण हो’ एक लगानीकर्ताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ‘धितोपत्र बोर्डले के आधारमा यति मूल्यमा सहमति दियो, हामीले नै सोच्न सकेका छैनौँ, यो पूर्ण रुपमा फ्लप एफपिओ हो’ उनले दावी गरे। यसअघिका कुनै पनि एफपिओमा यस्तो दुर्दशा नभएको भन्दै उनले कम्पनीले आइपिओ जारी नगरी एफपिओ ल्याउनु पनि दोषी रहेको औंल्याए। ‘प्राथमिक बजारमा प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँमा जारी नगर्ने, अनि एफपिओका नाममा लगानीकर्तालाई ५०१ मा भिराउन खोज्ने ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे। प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँमै खुलेको एफपिओमा पर्याप्त आवेदन नपरेपछि दोस्रो बजारमा समेत कम्पनीको मूल्य उच्च दरले ओरालो लागेको छ। एक साताको बीचमा कम्पनीको मूल्य ६३३ बाट ५५८ मा झरेको छ। पुस ३० गते कम्पनीको मूल्य ७११ रुपैयाँ थियो। सेयर किन्नेभन्दा बेच्नेको लस्कर देखिएकाले कम्पनीको मूल्य अझै घट्न सक्ने लगानीकर्ताको अनुमान छ। ‘५०१ मै बिक्री नभएको सेयरलाई बजारमा कसैले पनि त्योभन्दा बढी तिर्दैन, स्वभाविक रुपमा उसको मूल्य अझै घट्ने देख्छु’ ति लगानीकर्ताले भने। धेरै संख्याको एफपिओ भएकाले भोलि त्यसले बजारमा झनै चुनौति थपिने उनले बताए। बुटवल पावरको हाल प्युठानको दारिमचौरमा १२ मेगावाटको झिमरुक, स्याङ्जाको गल्याङमा ९. ४ मेगावाटको आँधिखोला जलविद्युत आयोजना संचालनमा छन्। कम्पनीले ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजनामा पनि लगानी गरेको छ। निर्माणाधिन ३० मेगावाटको न्यादी तथा ३७ मेगावाटको काबेली ए आयोजनामा पनि कम्पनीले लगानी गरेको छ। एफपिओ बिक्रीबाट प्राप्त हुने ४०. ८१ करोड यिनै दुई आयोजनामा लगानी हुने कम्पनीले जनाएको छ। ति दुई आयोजनामा उपयोगपछि भवन निर्माणका लागि लिइएको ऋण चुक्ता गर्न सकिने बिपिसीले जनाएको छ। कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ८१ करोड छ। यसअघि पहिलो त्रैमासिक अवधिको स्थिति हेर्दा उसको प्रतिसेयर आम्दानी ३ रुपैयाँ ९९ पैसा छ। नेट वर्थ २३० रुपैयाँ छ।